Mnangagwa speaks on foreign medical trips - The Zimbabwe Mail
HomeHealthMnangagwa speaks on foreign medical trips
Mnangagwa speaks on foreign medical trips
Mugabe and his wife Grace have, on several occasions, been flown out of the country for “emergency” medical checks in Singapore.
The Mugabes left early last month in a flight chartered by Mnangagwa’s government, New Zimbabwe.com reported.
At the height of the ruling Zanu-PF factional fights last year, Mnangagwa was reportedly airlifted to South Africa, following reports that he was “poisoned” at a rally in Gwanda.
A News Day report quoted a well-placed source as saying that Mnangagwa was taken out of the country in the company of his wife Auxillia.
A few weeks ago, Mnangagwa’s deputy, Constantino Chiwenga, was also in a South African hospital where he was treated for the effects of a bomb blast targeting Zanu-PF leaders at a rally in Bulawayo in June, reported the state-owned Herald newspaper.
Chiwenga was now back in Zimbabwe.